Lumavate: Usoro ekwentị mkpanaka dị ala maka ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnụbeghị okwu ahụ Web ngwa na-aga n'ihu, Ọ bụ teknụzụ ị kwesịrị ị na-a attentiona ntị. Cheedị ụwa nke na-anọdụ n'etiti ebe nrụọrụ weebụ na-ahụkarị na ngwa mkpanaka. Gị ụlọ ọrụ nwere ike chọọ ka a siri ike, atụmatụ ọgaranya ngwa nke ahụ bụ ihe na-ekere òkè karịa a website… ma ga-amasị-eleghara mmefu na mgbagwoju anya nke iwu ihe ngwa na-achọ na-etinye site na ngwa na-echekwa.
Kedu ihe bụ ngwa ntanetị na-aga n'ihu (PWA)?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ itinye ngwa mkpanaaka, enwere ọtụtụ nsogbu ịma aka nwere ike imeri na ngwa weebụ na-aga n'ihu.
Ngwa gị achọghị ka ịnweta elu ngwaike atụmatụ nke ekwentị mkpanaaka ma ị nwere ike ịnye atụmatụ ọ bụla site na ihe nchọgharị mkpanaka kama.
your laghachi azụmaahịa ezughi iji kpuchie ọnụahịa nke ngwa ngwa mkpanaka, ntinye, nkwado, nkwado, na mmelite achọrọ site na ngwa ngwa.
Azụmaahịa gị adabereghị na oke nkuchi ngwa, nke nwere ike ịbụ ihe dị mgbagwoju anya ma dịkwa oke ọnụ iji nweta nkuchi, njikọ aka, na njigide. N'ezie, ịrata onye ọrụ ibudata ngwa gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ohere buru ibu ma ọ bụ mmelite ugboro ugboro.
Ọ bụrụ n ’ị chere n’ekwentị bụ naanị nhọrọ, inwere ike ịtụgharị uche na atụmatụ gị. Alibaba gbanwere PWA mgbe ha na-agba mbọ ị nweta ndị na-azụ ahịa ịlaghachi na ikpo okwu eCommerce ha. Na-atụgharị ka a PWA weputara ụlọ ọrụ ịrị elu 76% na ngbanwe mgbanwe.
Lumavate: Onye na-ewu PWA nke Dị Ala
Lumavate bụ usoro ihe eji eme ihe maka ekwentị na-eduga maka ndị ahịa. Lumavate na-enyere ndị ahịa aka ngwa ngwa iwu ma bipụta ngwa ngwa mkpanaka na-enweghị koodu achọrọ. A na-ebute ngwa ngwa mkpanaka niile ewuru na Lumavate dị ka ngwa weebụ na-aga n'ihu (PWAs). Ndị otu dịka Roche, Trinchero Wines, Toyota Industrial Equipment, RhinoAg, Wheaton Van Lines, Delta Faucet, na ndị ọzọ tụkwasịrị Lumavate obi.
Uru nke Lumavate
Mbido Ọsọ - Lumavate na-eme ka ọ dịrị gị mfe iji ewu ma bipụta ngwa ngwa mkpanaka n’ime naanị awa ole na ole. Nwere ike iji otu n'ime ngwa ngwa ha (ngwa ndebiri) nke ị nwere ike degharịa ma ọ bụ wuo ngwa site na ncha site na iji nchịkọta wijetị, microservices, na akụrụngwa.
Bipụta ngwa ngwa - Gafere ụlọ ahịa ngwa ahụ ma mezie mmelite oge na ngwa gị nke a ga-enyefe ndị ahịa gị ozugbo. Na, echegbula onwe gị maka ịmepe maka sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ dị iche iche ọzọ. Mgbe ị na-ewu ụlọ na Lumavate, ahụmịhe gị ga-adị mma na ụdị niile.
Ngwaọrụ Agnostic - Mee otu ugboro maka otutu ụdị ihe na sistemụ arụmọrụ. A na-enye ngwa ọ bụla ejiri Lumavate rụọ ọrụ dị ka App Web Progressive (PWA). Ndị ahịa gị nwetara ahụmịhe kachasị mma na ekwentị ha, laptọọpụ, ma ọ bụ mbadamba ha.
Metrik Ekwentị - Lumavate jikọtara na akaụntụ Google Analytics gị dị ugbu a iji nye gị ezigbo nsonaazụ oge ị nwere ike ị nweta ego na ozugbo. Have nwere ohere zuru oke nke data ndị ahịa bara uru dabere na otu, mgbe, na ebe a na-enweta ngwa gị. Ma, ọ bụrụ na ị na-eji nyiwe nchịkọta ndị ọzọ maka azụmahịa gị, ị nwere ike ịmekọrịta Lumavate n'ụzọ dị mfe na ngwaọrụ gị kachasị amasị gị ma nwee data gị niile n'otu ebe.
Lumavate etinyela PWA n'ofe ọrụ, gụnyere CPG, Mwube, Ọrụ Ugbo, Njikọ Ndị Ọrụ, Ntụrụndụ, Ihe Omume, Ọrụ Ego, Ahụike, Ile Ọbịa, Nlụpụta, talọ oriri na ọtaụ ,ụ, na ụlọ ahịa.
Hazie ngosipụta Lumavate
Tags: obere-koodudị mmamobile ngwa na-ewu ụlọngwa mkpanaaka
Douglas Karr Sunday, June 21, 2020 Sunday, June 21, 2020
Otu esi emeziwanye nkà gị ederede
ShortStack: Ibe ọdịda facebook na asọmpi mmekọrịta ọha na eze mere ka ọ dị mfe